Hevitra · Novambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Hevitra · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Hevitra tamin'ny Novambra, 2018
Jordania: #HashtagDebates (adihevitra momba ny tenifototra) sy Fanavaozàna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Novambra 2018
Tao Makan no natao ny #HashtagDebates andiany faharoa nokarakarain'ny 7iber, tao Amman, tamin'ny harivan'ny 7 martsa. Mandray anjara amin'ny fanatevenana ny adihevitry ny daholobe teny anaty tambajotra sy ivelan'ny tambajotra.
Arzantina: 20 taonan'ny sarimihetsika sy sarimiaina “El Mate” maimaim-poana any an-tsekoly
Amerika Latina 26 Novambra 2018
Nandritra ny 20 taona mahery, ankizy sy zatovo Arzantiniana an-jatony maro no nianatra momba ny fanaovana horonantsarimihetsika sy sarimiaina izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana Taller de Cine El Mate, ary ahafahan'ireo ankizy avy ao amin'ny kaominina Vicente López ao Buenos Aires mandray anjara sy mitrandraka ny dingana fanaovana filma maimaim-poana.
Misy zavatra ampahibemaso bebe kokoa noho nyTwitter ve?
Amerika Avaratra 23 Novambra 2018
Inona ny fitsipika amin'ny famoahana sioka tsy nahazoan-dalana? Amin'ireo mpiserasera an-tapitrisany, hitan'ny olon-drehetra ve ny zavatra rehetra lazaintsika ao amin'ny Twitter?
Misy Mony? Hampandoa Hetra amin'ny Fitsaboanao izany i Korea Atsimo
Azia Atsinanana 22 Novambra 2018
Andoavana hetra ny fipoiran'ny mony amin'ny tarehinao? Tena fomba hafa kely marina hanangonana hetra izy ity.
Rosia: Drug Drugu, Fanatanterahana Nofinofy amin'ny Alalan'ny Tambajotra Sosialy
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Novambra 2018
Tolotra iray miodina amin'ny fanirian'ireo mpampiasa azy ny Drug Drugu (rohy maty) [ru] ("Ho ahy sy Ianao"). Tsy afaka mangataka fanampiana fotsiny ireo mpikambana ao anatin'ny vondrompiarahamonina fa mila manome ny fanampiany ihany koa. Mifantoka aminà bokotra roa ny hetsik'ireo mpampiasa: "Maniry" sy "Afaka."
Azia Atsimo: Valintenin'ireo fiarahamonina an-tambajotra manoloana ny horohorontany
Azia Atsimo 20 Novambra 2018
Japana : Ny Fankafizàna Saka
Japana 20 Novambra 2018
Ao Japana, tsy ny fanalana andro ihany no lohahevitra hany resahana ao anaty aterneto : Ny fitiavana ny biby naman'ny olombelona no resaka isan'ny tena malaza anaty blaogy. Ny saka, indrindra indrindra, dia maka ny laharana voalohany amin'ny filaharan'ny “blaogy momba ny biby”
Ny sary hosodokon’ny ambasadaoro Indiana any Kroasia, fanomezana nanaovam-beloma tena nampiady hevitra tao amin’ny fampitam-baovao
Azia Atsimo 18 Novambra 2018
Nanao veloma ireo manampahefana tao Kroasia ny ambasadaoro Sandeep Kumar tamin’ny fanolorana fanomezana ny sasany tamin’ireo sary hosodoko nataony nandritra ny telo taona niasany tao amin’ny firenena.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Novambra 2018
Bilaogy Libyana: Ny herinandro faran'ny taona 2006
Ny lohahevitra fototra nanjaka tamin'ny bilaogy Libyana nandritra ity herinandro farany ity dia ny taona vaovao, ny Krismasy sy ny Eid, ary i Khadijater manoratra momba ny fankalazana ny Eid Al Adha sy ny fampiasana sary ho fanazavana.